बैंकिंङ/बीमा - एनसीसी बैंकले ल्यायाे भिसा क्रेडिट कार्ड, कसले पाउँछन् निःशुल्क ? - page 3
एनसीसी बैंकले ल्यायाे भिसा क्रेडिट कार्ड, कसले पाउँछन् निःशुल्क ?
काठमाडौं । एनसीसी बैंक लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रदायक कम्पनी भिसासँगको सहकार्यमा २०७६ साल आषाढ ३ गतेबाट NCC VISA Credit Card शुभारम्भ गरेको छ । यस बैंकको भिसा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी नेपालभित्रको कुनै पनि ATM/POS मेशिन मार्फत सामान वा सेवा लिन सकिने, EMV (Chip Based) मा आधारित सुरक्षित कार्ड, यात्राको लागि विशेष उपयोगी, भुक्तानीमा लचकता र नगद झिक्न सकिने सुबिधा रहेको छ । NCC VISA Credit Card को शुभारम्भ अफर भनेर बैंकले आषाढ महिना भरि नयाँ NCC उत्सव बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई पहिलो वर्ष निशुल्क NCC VISA Credit Card उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । चार वर्ष चार महिनाअघि तत्कालिन सरकारले डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउँदा वित्तिय क्षेत्रले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेको थिएन । किनभने उनी मूलधारको अर्थतन्त्रका ज्ञाता थिएनन् । उनको पीएचडी नेपाली बाल श्रमिकका अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको विषय थियो । तर धेरैले एउटा अनुमान चाहिं पक्कै गरेका थिए उनी शेयर बजारको चलखेलमा रुचि राख्ने मानिस हुन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भइसकेका नेपालको ध्यान शेयर बजारको उतारचढावप्रति स्वभाविक रुपमै हुने कुरा भयो ।	थप पढ्नुहोस्
सुधारिदै नेप्से परिसूचक,कारोवारमा भने कमी
काठमाडौं । लगातार ओरालो लागेको शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने केही सुधार देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २.६३ बिन्दुले वृद्धि भई एक हजार २६०.९० अङ्कमा पुगेको छ । त्यस्तै ठूला कम्पनीका कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.२९ ले वृद्धि भई २७०.२६ अङ्कमा पुगेको छ । परिसूचक सामान्य सुधार भए पनि कारोवार रकम भने घटेको छ । कूल १७३ कम्पनीका १३ लाख ७३ हजार १३० कित्ता शेयर रु ४० करोड ३५ लाख ३८ हजार १४७ मा खरीद बिक्री भएकोमा कूल ११ उपसमूहको कारोवार भएकामा आज तीन उपसमूहको शेयर घटेको छ भने आठ उपसमूहको शेयर बढेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ ।नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि. र ग्राण्डी इन्टरनेसनल अस्पतालबीच बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूलाई उपचार शुल्कमा सहुलियत दिने विषयमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश राज अर्याल र ग्राण्डी अस्पतालका तर्फबाट मार्केटिंग विभाग प्रमुख दिनेश पौडयालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार, अब नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले ग्राण्डी अस्पतालका सेवाहरूमा विशेष छुट पाउनेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता सहजीकरणका लागि केही नयाँ मौद्रिक औजारहरुसहित आगामी बर्षको मौद्रिक नीति असार तेस्रो साता सार्बजनिक गर्ने भएको छ। साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्यलाई सघाउ पुग्ने गरी खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। अहिले राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुसँग सुझाब मागिरहेको छ। केही दिनमै राजधानीमा सबै सरोकारवालालाई बोलाएर सुझाब संकलन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। प्रत्येक बर्ष छुट्टै जगेडा कोषमा रकम छुट्याउनु नपर्ने गरी नयाँ ऋणपत्र जारी गर्न पाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दैछ ।	थप पढ्नुहोस्
शेयर बजार घटेको घट्यै,लगानीकर्ताको मनोबल अस्थिर
काठमाडौँ। आइतबार साताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ। कारोबार मापक नेप्से सूचक ११.३६ अंकले घटेर १२५८.२७ अंकमा झरेको छ। ११ समूहको शेयर कारोबारहुँदा कारोबारको पहिलो १५ मिनेट सूचक एक अंकले बढेको भए पनि त्यसपछि बजार कारोबारको अन्त सम्मनै बिस्तारै ओरालो लागेको थियो। कारोबारमा आएका सबै उपसूचक घटेपछि बजार ओरालो लगेको हो। सबैभन्दाबढी निर्जीवन बीमा समूहको २.०६ प्रतिशतले उपसूचक घटेको छ। यसैगरी लघुबित्त समूहमा २.०१ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ। आइतबार १७४ कम्पनीका शेयर कारोबार भए। १४ लाख ७३ हजार कित्ता शेयर ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भयो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं। माछापुच्छ्रे बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासनको लागि रेटिङ गराएको छ। इक्रा नेपालका अनुसार बैंकले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित जनाउने रेटिङ ‘‘इक्रा एनपि आइआर ए माइनस’ प्राप्त गरेको छ। बैंकले १०.२५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको हो। तीन अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्नेछ। १९ वर्षदेखि वित्तीय कारोबार गर्दै आएको माछापुच्छ्रेको शाखा कार्यालय एकसयवटा छन्। बैंकको पूँजीकरणको अवस्था राम्रो रहेकोले ऋणपत्र पनि सुरक्षित रहेको एजेन्सीले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
बजेटपछिका नौ दिन, ४४ अङ्कले घट्यो शेयर बजार
काडमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र बजारप्रति सकारात्मक सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि त्यसको प्रभाव परेको छैन । यही जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४४.३२ बिन्दुले ओरालो लागेको छ । बजेटपछि बजार नौ दिन खुला रह्यो । बजेटले केही नीतिगत व्यवस्था गरेपनि बजार भने निरन्तर ओरालो लागेको छ । यस साता पनि बजारको मापक सूचक ओरालो लागेरै बन्द भएको छ । केही कम्पनीको शेयर भने निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । कुमारी बैंकको अध्यक्षमा अमिरप्रताप राणा चयन भएका छन् । आज जेठ ३१ गते बोलाइएको विशेष साधारण सभाबाट चार जना संचालक निर्वाचित भएलगत्तै बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले राणालाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । निर्वाचित हुनेमा संस्थापक समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अमिरप्रताप राणा र कृष्णप्रसाद ज्ञवाली साथै सर्वसाधारण समूहको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने महेशप्रसाद पोखरेल र श्रीमति अनुराधा चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भएको बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि तयार रहन सबै लघुवित्त संस्थाहरुलाई सचेत गराएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मर्जरका लागि तयार रहन सबै लघुवित्त संस्थाहरुलाई सचेत गराएका हुन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘लघुवित्त संस्थाको मर्जर र आवश्यक्ता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले ग्रामिण क्षेत्रको गरिवी निवारणका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउन टेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको लघुवित्त संस्थाको दिगोपनाका लागि पनि मर्जर अति आवश्यक भएको स्पष्ट पारे ।	थप पढ्नुहोस्